thinzar's blog: February 2007
Labels: တောင်ကြီး, ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလေးတင် people online magazine မှာ CITY FM ၅နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားမှာ အုပ်စုလိုက်ရေပန်းအစားဆုံးအဖွဲ့ ကို IMP ကရသွားတယ်ဆိုလို့။
ဒါကိုဖတ်မိတော့ ဝမ်းလည်းသာတယ်။ တောင်ကြီး GCC ကိုလည်း ပြန်သတိရမိတယ်။ အရင်တုန်းက ကျောင်းမှာ fresher welcome ရှိတိုင်း သူတို့အဖွဲ့က တီးတာလေ။ သူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကို သူတို့ဟာIMP ဆိုတာ မသိခင်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တာ.. e.g., မျက်နှာ၊ လှပြီးသားပါ တို့ပေါ့။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဪ..တော်တော်ဂီတဝါသနာ ပါတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတွေပေါ့။ အခုလို အောင်မြင်သွားတော့လည်း ဂုဏ်ယူစရာပါ။ Wish you will achieve greater success!
တောင်ကြီးကလူတွေကတော့ တော်တော့်ကို ဂီတဝါသနာကြီးကြတာ။ ကျောင်းမှာ fresher welcome ဖြစ်ဖြစ်၊ farewell ဖြစ်ဖြစ် သီချင်းဆိုချင်တဲ့သူတွေ အရမ်းအရမ်းကို များပါတယ်။ အားလုံးကလည်း သူ့talent နဲ့ သူပါပဲ။ ကျောင်းသားတွေ တီးကြဆိုကြ၊ ပြဇာတ်တိုလေးတွေကကြနဲ့တော်တော်တော့ ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အသံအရမ်းကောင်းတဲ. သူငယ်ချင်း KKS တစ်ယောက်ကိုလည်း အမြဲသီချင်းဆိုနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။
စာရေးရင် သတိထားကြပါတဲ့။ ဒီနေ ့ဖတ်မိပြီး တော်တော်လေးရီလိုက်ရတဲ့ ဟာသလေးပါ။
Infosys, Bangalore : ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ခွင့်စာ...
This is from Oracle Bangalore: > မိမိသား ရှင်ပြုအတွက် ခွင့်နှစ်ရက်ကို ဒီလို တောင်းတယ်တဲ့...
Another gem from CDAC. သမီးဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရမို့တစ်ပါတ်ခွင့်ယူတဲ.စာ...
From H.A.L. Administration Dept: ယောက္ခမဆုံးသွားလို့ခွင့်ယူခြင်း...
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က နေ ့တစ်ဝက်ခွင့်စာကို ဒီလိုရေးတယ်...
ဇနီး နေမကောင်းဖြစ်လို ့ပါ...
နေမကောင်းလို့ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီပို ့တဲ့ ခွင့်စာ...
"This has reference to your advertisement calling fora' Typist and an Accountant - Male or Female'... As I am both(!! )for the past several years and I can handle both with good experience, I am applying for the post
ခွင့်စာရေးမယ်ဆိုရင် ဒီကလာကူးလို ့ရတယ်နော်။ copyright မရှိဘူး။
တခြားသူတွေတော့မသိဘူး။ ကျွန်မတော. Software တစ်ခုခုလိုချင်ရင် ကျောင်းကနေ တောင်းရင်တောင်း၊ မဟုတ်ရင် pirated software ကိုဝယ်ပြီး install လုပ်လိုက်တာဘဲ။ ဒီတော့ လိုင်စင် software ရဲ.တန်ဖိုးကို တစ်ခါမှမစဉ်းစားမိဘူး။ ဒီနေ.တော. ရုံးမှာ project တစ်ခုအတွက် လိုတဲ. Software တစ်ခုကို သွင်းခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မကို installer CD ပေးတော့ အသစ်စက်စက်.. အပြင်က ပလတ်စတစ်တောင် မခွာရသေးဘူး။ ဈေးနှုန်းကြည့်လိုက်တော. RM 1860 (~US$500) တဲ့။ ဪ.. ဒါကြောင့် Bill Gates သူဌေးဖြစ်သွားတာကိုး။
ဒီလိုကြပြန်တော.လည်း open source community ကို contribute လုပ်နေတဲ့ ပရိုဂရမ်မာတွေကြတော့ တကယ်လေးစားစရာဘဲ။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်မှာ အေးအေးဆေးဆေးမနေရအောင် ကျွန်မကို် အလုပ် ပေးလိုက်တဲ့ software ကတော့ (Crystal Report XI) တဲ့။ တစ်ခါမှတောင်မကြားဖူးတဲ့ အဲဒီ crystal report ဆိုတဲ့ဟာကြီးကို လေ့လာရမယ့်အပြင် .NET နဲ့တွဲသုံးဖု်ိ့code ကိုလဲ ရှာရဦးမတဲ့။ တကယ်မလွယ်ပါလားနော်။
၅၉၁ မျက်နှာရှိတဲ. Manual ကိုတော့ download လုပ်ထားပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် အစကနေစဖတ်ရင်ကောင်းမလား၊ အလယ်ကနေစဖတ်ရင်ကောင်းမလား လို့စဉ်းစားရင်းနဲ. ရုံးပိတ်ရက် လေးရက် ဒီလိုဘဲ ဝေလေလေနဲ. ကုန်သွားတယ်။ မနေ ့ညကတော့ အဆုံးနားလောက်ကနေ စဖတ်လိုက်တာ နည်းနည်းတော့ အိုင်ဒီယာရသွားတယ်။
စာတွေဖတ်ရမှာ အရမ်းပျင်းတာဘဲ။ သင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေကုန်ဆိုရင်လဲ နားထောင်နိုင်တယ်။ ဖတ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်နဲ့မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ တစ်ခြားသူတွေ ဘယ်လိုဖတ်ကြတာလဲဟင်
Wish everyone "Happy Chinese New Year".. ~Gong Xi Fa Cai~ 恭喜發財.. 新年快乐!!
Just so happy about it since I got4days off from office though nobody is going to give me any 紅包. :)
အစက ဒီနေ.တော.ဘလော.ဂ်ရေးနိုင်တော.မှာ မပာုတ်ဘူးလို.ထင်ထားတာ..
အပြင်မှာမိုးတွေအရမ်းရွာနေတယ်.. ပြန်ဖို.ကထီးလည်းမရှိတာနဲ. စောင်.ရဦးမယ်.. LRT station ကိုရောက်ဖို. ၁ဝမိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရမှာဆိုတော. ရွှဲမှာသေချာတယ်..
အင်း ... ဘာရေးရမှာလည်း လဲစဉ်းစားလို.မရဘူး ..သူများတွေလိုမြန်မာစာအရေးအသားမကောင်းတော.လည်း ဝမ်းနည်းတယ်..
ဪ..ဒါနဲ. aircon နဲ.ပါတ်သတ်ပြီး ကြုံရတဲ.ပာာသလေးတွေရှိတယ်.. အရင်တစ်နှစ်နွေမှာ camp သွားတုန်းကပေါ. .. ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ. တစ်ခန်းထဲ နေရတယ်... အဲဒီမှာပြသနာကစတာဘဲ .. မမချောက ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ်ကလာလို.ဘဲတော်တော.တယ် .. အအေးကြောက်လိုက်တာမှ လွန်ရော .. တို.က aircon 20 C လောက် ဖွင်.ထားရင် သူက ညညဆိုထပြီး 30 C လောက်အထိတိုးလိုက်တယ်.. ပထမ တစ်ရက်နှစ်ရက်ကတော. ဘာလို.အဲလောက်ပူလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို.မရဘူး ..နောက်မှ သူ.လက်ချက်မှန်းသိလိုက်တာ... ပာူး.. ပြောရမှာလဲအားနာတာနဲ. .. သူတိုးရင် တို.ကထပြီးပြန်လျှော.တယ် ... တို.လျှော.ထားလို.သူနိုးလာရင် .. သူကပြန်တိုးထားလိုက်တယ်.. ဒီလိုနဲ. သူနဲ.ကျွန်မ ၈ရက်လောက်အတူတူနေဖြစ်ခဲ.ကြပါတယ်..
ဒီရက်ပိုင်းမှာရုံးကအလုပ်တွေနဲ.ရှုပ်နေတာနဲ့ blog တောင်မရေးအားဘူး .. သူများblog တွေတော.မှန်မှန်ဖတ်ဖြစ်တယ်..
training ကျောင်းသားမို့လားမသိ.. အသေအသေခိုင်းတယ်... အတွေ့အကြုံကတော.အရမ်းရတယ်.. .NET ဆိုတာနာမည်သာကြားဖူးတဲ့ဘဝကနေ .NET junior programmer နီးနီးလောက် သိသွားအောင် ခိုင်းပေးတဲ. (oops. သင်ကြားပေးတဲ.) supervisor ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒီနေ့ဆိုရင် အလုပ်ခွင်နဲ့ထိတွေ့ရတာ သုံးလပြည့်ပြီလေ.. နောက်ထပ်နှစ်လ အခိုင်းခံရန်ကျန်သေးသည်။ အလုပ်လုပ်ရတာတကယ်မလွယ်ပါဘူး .. ကျောင်းကိုတောင်လွမ်းလာပြီ.. ကျောင်းသားဘဝက အလွပ်လပ်ဆုံးဆိုတာ အခုတော့နားလည်လိုက်ပါပြီ..
အရင်အပတ်က အခုလုပ်နေတဲ့ project အတွက် UAT ရှိတယ်လေ.. အဲဒီအချိန်မှ design ရဲ. အရေးပါပုံကို နားလည်လိုက်တယ်.. programmer တစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ code တွေနဲ့ရေးထားထား customer တွေက design နဲ. look and feel ကိုပို အလေးထားတာကိုသိလိုက်ရတယ်.. (အင်းလေ.. ဘာတွေနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာ သူတို့မှမသိတာ)
အဲဒီတော. programmer တွေကိုသနားမိတယ်.. သူတို့ကပြောသေးတယ်။ "You may have the best engine in the world for your car, but if the car design is not nice, no one will appreciate your car" တဲ့ ..အဲဒါနဲ. စိတ်နာနာနဲ့ design ကိုလေ့လာပါတော့မယ်.. မတောက်တခေါက် photoshop နဲ့ flash ကို ကျွမ်းကျင်ချင်ပါတယ်... ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ???